Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: mandoza aiza ny fanaovana ny fifidianana araky ny fanapahana | NewsMada
Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: mandoza aiza ny fanaovana ny fifidianana araky ny fanapahana
Mizara roa ny hevitra. Ao ny fanjakana izay mandroso hatrany mikasika ny fanomanana ny fifidianana Filohan’ny Repoblika sy ireo efa miomana ho amin’izany. Eo andaniny kosa ireo tsy mbola resy lahatra amin’ny hanaovana ny fifidianana amin’ny fotoana maimaika, araka ny heviny. Karazan-doza maro no mitatao hoy izy ireo. Tsy lavina fa mety hitranga ihany izany noho ny tsy fahampian’ny fitsipika mifehy ny fifaninanana. Antony mety tsy aneken’ny rehetra ny voka-pifidianana havoaka.
Na izany aza tsy tokony hiseho izay tranga izay raha miezaka amin’ny fametrahana lamina tsy maintsy hajain’ny rehetra ny tompon’andraikitra. Tsy tokony havela mandalo amin’izao ny vintana ahafahana manova famindra eo amin’ny fikirakirana sy fitantanana ny raharaham-pirenena. Tsy misy hery matanjaka irery raha araky ny fandehan-draharaha izao, tsy misy hery afaka manao barofo. Ity angamba ny fifidianana voalohany izay itovitovian’ny mpifaninana vintana. Na eo aza ny fahasamihafana mikasika ny vatsy enti-miady izay mety ho antoka manan-kery lehibe ho an’ny fahombiazana. Tsy hita ho resahana firy ny momba an’izay. Tsy misy fetra ny enti-manana ary tsy misy afa-tsy ny jadona ny fomba fitrandrahana ny tena marina mikasika ny loharanom-bola famatsiana ny fampielezan-kevitra. Lainga daholo ny filazana fahamarinana momba izany ka samy mangina avokoa manodidina ny resa-bola.
Ny maresaka rehefa namoaka ny fe-potoana fanaovana fandresen-dahatra ny fitondrana dia momba ny fanaovana fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana izay. Voalohany dia mbola tsy misy mpifaninana ofisialy ankehitriny na efa misy aza ireo nanambara ampahibemaso ny fikasany hilatsaka ho fidiana. Tsy azo lazaina manao fandresen-dahatra izay manao izay afany amin’ny fomba samihafa mikasika ny tetika kasainy ampiharina ho fampandrosoana ny firenena. Karazan’ny dokam-barotra momba izany fitaovana izany no ataony ary na azo heverina ho fomba ankolaka ihany aza izany, tsy mbola nisy nanota mivantana tamin’ny fiantsoana hoe «fidio ny tenako».
Ny filoha amperin’asa moa dia manararaotra ny mbola maha eo azy amin’ny fampiasana fahefana sy fitaovam-panjakana ka tsy mamela mahazo raha vao iny misy irika kely ahafahany mandoka tena sy mampivoitra ny kely vita. Noho izany, rariny dia rariny raha toa 90 andro mialoha ny fikatrohana dia tsy maintsy manendaka ny tenany avy eo amin’io toerana misy azy io izy raha toa sahy mifanandrina amin’ireo mpifaninana izay heverina ho maro dia maro.